Wasiirka Boostada oo soo gaba gabeeyay safar uu ku tagay Puntland | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wasiirka Boostada oo soo gaba gabeeyay safar uu ku tagay Puntland
Wasiirka Boostada oo soo gaba gabeeyay safar uu ku tagay Puntland
Wafdi uu hoggaaminayay Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyada, Md. Eng Cabdi Cashuur Xasan, ayaa soo gaba gabeeyay safar shaqo oo uu ku tegay magaalooyin ka tirsan Puntland.
Wasiirka, oo ay safarka ku wehliyeen Wasiiru-dawlaha, Mudane C/laahi Bile Nuur iyo hawl-wadeenno ka tirsan Wasaaradda, ayaa socdaalkiisa ka billaabay caasimadda Puntland ee Garoowe, waxayna ujeeddadiisu ahayd sidii loo sii xoojin lahaa wada-shaqeynta, loona soo kormeeri lahaa mashaariicda ay Wasaaraddu ku lug leedahay ee ka socda Puntland iyo xarigga internetka ee shirkadda Golis.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa ugu horreyntii kulan kula yeeshay magaalada Garoowe Madaxweynaha Puntland, Dr. C/weli Maxamed Cali (Gaas), wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta Puntland, Cabdi Xersi Cali (Qarjab), iyo mas’uuliyiin kale, waxayna ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada-shaqeynta ka dhexeysa wasaaradda heer federal iyo dawlad-goboleed, iyagoo isku afgartay dhammaan qodobadii ay ka wada hadleen.
Wasiirku wuxuu sidoo kale booqday xarunta uu ka soo dago xarigga badda hoosteeda mara ee internetka (fiber optic cable) ee ay dhowaan magaalada Boosaaso ka hirgelisay shirkadda Golis. Wasiirka oo kulan gaar ah la yeeshay mas’uuliyiinta Golis ayaa uga mahad celiyay sida ay uga soo jawaabeen baaqii uu hore u jeediyay ee uu ku dhiirri-gelinayay shirkadaha inay dalka keenaan xargo kale.
Ugu dambeyntii wasiirka ayaa ka mahad celiyay soo-dhoweyntii loo sameeyay isaga iyo wafdigiisa. “Waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha Puntland, wasiirka isgaarsiinta iyo ku-xigeennadiisa iyo madaxda Golis sida sharafta leh ee ay noo soo dhoweeyeen, waxaan rajeyneynaa inaan sii kordhin doonno wada-shaqeynteena,” Ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wasiirku.